Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo soo xiray Kulankii Golaha ee maanta oo ismari-waa’ kusoo dhamaaday – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, ayaa soo xiray Kulankii 3-aad ee Golaha, iyadoon Xildhibaannada Goluhu ka doodeen Ajandihii Kulankaas ee maanta. “Kulankeeni maanta waan xirnay, wuuna noo xiran yahay” ayuu mursal ku yiri Xildhibaannada Golaha, wuxuuse ka horeysiiyey ineysan sax ahayn inuu Kulanka Golaha ee maanta u baaqday buuq iyo fowdo.
Guddoomiye Mursal ayaa sheegay iney, ka Guddoon Golaha ahaan, soojediyeen inuu Kulanka Golaha ee maanta noqdo mid furan ama xiran, waxaana 104 xildhibaan oo ka mid ah golaha ay ogolaatay aragtida ah in Kulanka Golaha Shacabka albaabada loo xiro, iyada oo 42 Xildhibaan ay diidday, halka 20 kalena ay ka aamuseen, sida uu Guddoomiyaha Goluhu sheegay.
“Codaan idiin weydiinay, waxaana idinku niri, si loo ilaaliyo sirta amniga qaranka, fadhigaan ma wuxuu noqonayaa fadhi xiran ama fadhi furan” ayuu ku yiri xildhibaannada, inta uusan soo xiran Kulanka Golaha. Isaga oo cudurdaar ka dhiganaya inuu goluhu badi diiday in ay saxaafaddu kulanka joogto ayuu yiri “maadaama aad diideen anaga xaq uma lihin xildhibaan iridka istaagay oo yiri iridkaas lagama baxaayo”.
Mursal waxa uu ka digay in golaha laga dhigo meel fowdo iyo buuq badan, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uuna soojeediyey in ay xildhibaannadu u hogaansamaan meesha uu codka ugu badan raacay oo ah in saxaafaddu ay dibadda ka joogto Kulanka Golaha ee Amniga looga hadlayo. “Waxaan rabnaa in loo hogaansamo 104-tanka codeysay – majoorati in loo hogaansamo, fadhiguna uu noqdo mid xiran” ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Intii uu Guddoomiyuhu waday hadalka, waxaa hadba marka uu taabto meel xasaasiyo ku buuqayey Xildhibaannada diidan waxa uu ka hadlayo, iyada oo kuwa taageersanna ay sacab u tumayeen. Hase ahaatee, Wasiirka Amniga iyo Taliyayaasha Ciidanka Booliska, Militariga iyo Asluubta waxay dib uga laabteen Golaha iyagoon ka hadlin, waxna laga weydiin amaanka dalka.
Xildhibaanno muujiyey sababta ay u diidayaan in saxaafadda dibadda looga saaro Golaha Shacabka